सार्वजनिक यातायातमा आर क्षण कहिले लागु हुने ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / पाठक पत्र / सार्वजनिक यातायातमा आर क्षण कहिले लागु हुने ?
सार्वजनिक यातायातमा आर क्षण कहिले लागु हुने ?
Posted by: युगबोध in पाठक पत्र April 3, 2017	0 211 Views
सार्वजनिक यातायातमा आर क्षणको व्यवस् था भए पनि लागु हुनसके को छै न । सार्वजनिक सवार ी साधनका रुपमा र हे का बसहरुमा महिला, अपांग, ज्ये ष्ठ नागरि कहरुलाई आर क्षण सिटको व्यवस् था गर े पनि कार्यान्वयन भएको पाइ“दैन ।
लामो दूर ीका गाडीहरुमा कार्यान्वयन हुने गर े पनि घो र ाही–तुलसीपुर , घो र ाही–लमही–भालुबाङलगायतमा चल्ने गाडीहरुमा लागु हुनसके को छै न । गाडीमा आर क्षणका लागि सिटहरु छुट्याएको भएपनि अधिकांश गाडीहरुमा महिला आर क्षण ले खिएको सिटमा पुरुषहरु बसे का हुन्छन्, ज्ये ष्ठ नागरि क, अपांग आर क्षण सिट ले खिएको भए पनि सपांग व्यक्तिहरु बसे को दे ख्न सकिन्छ ।
आर क्षण सिटप्रतिको उदासिनता एवं गाडीका चालक र सहचालकहरुले वास् ता नगर्दा महिला, अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आर क्षणवापत पाएको सुविधा उपभो ग गर्न सक्ने अवस् था छै न ।
गाडीभित्र चढे र आर क्षणको कुर ा गर्ने हो भने उल्टै हप्काइ खानुपर्ने अवस् था हामी महिलालाई र हे को छ  । त्यसै ले स् थानीय प्रशासन, प्रहर ी, यातायात व्यवसायीलगायतले सार्वजनिक सवार ी साधनमा आर क्षणको सिट कत्तिको उपभो ग भइर हे को छ भने र समय–समयमा निरी क्षण गर्न आवश्यक छ ।
कमला चौ धर ी
घो र ाही उपमहानगर पालिका–१६, दाङ
Previous: मो बाइलको निःशुल्क मर्मत
Next: स्थानीय तहको स्वरुप र आगामी निर्वाचन